Fitsirihana tampoka :: Fiara an-jatony voasazy tany Avaratry ny Nosy • AoRaha
Miitatra tany amin’iny faritra Avaratry ny Nosy iny ny fanaraha-maso nataon’ny Foibe fitsarana fiarakodia (DGSR) mba ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Mihoapampana ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra nandritra ny fitsirihana tampoka teny an-dalambe, ny 19 hatramin’ny 25 oktobra lasa teo. Anjatony ireo fiara voasazy.
Taratasina fiara valo amby efapolo amby zato no nosintonina tamin’ireo telopolo sy efajato nosavaina teny an-dalambe noho ny tsy fahalavorariana tamin’ny fiara. Fito amby efapolo hafa kosa ireo fiarakodia nampidirina vala famonjana noho ny tsy fanaovana fitsirihana ara-teknika sady ilàna fanamboarana manokana.
Fiara fito no voamarina fa tsy nahavita fandraisana arateknika. Valo ambin’ny folo no nomena fampitandremana sy toromarika amin’ny fikojakojany ny fiara ampiasainy. Enina amby fitopolo hafa indray nahitana tsy fahatomombanana ara-teknika, araka ny tatitra avy amin’ny DGSR.
Notsindrian’ny avy ao amin’ny DGSR fa hitohy sy hihamafy hatrany ny fitsirihana tampoka an-dalambe tahaka izao ary hivelatra manerana ny Nosy izany.
Fanohanana sy fanentanana :: Olona sivinjato norosoana sakafo mafana